Moe Kai: ကျေးဇူးတင်တယ် တဲ့လား
ဆရာဝန်လေးခမျာ ယူသင့် မယူသင့် ပထမတော့ ဒွိဟပါ။ ဆုံးသွားတဲ့ လူနာမှာ တခြား အမျိုးလဲ လွှဲပေးစရာ မရှိတာကြောင့် နောက်ဆုံးလက်ခံ လိုက်ပါသည်တဲ့။ လက်ခံပြီးမှ သိရတာက သူမအိမ်ကလဲ တကယ်တော့ သူမ မပိုင်တော့ပါဘူး။ သူမရဲ. နောက်ဆုံး အချိန် သူမရဲ. ဆေးကုသမှုတွေ၊ သူမကို နေ.စဉ်လာ အဝတ်အစား ဈေးဝယ် အစားအသောက် စတာတွေအတွက် ကူညီပေးတဲ့ သူတွေ(Carers)အတွက် အစိုးရက သူမအိမ်နဲ. စဘော်သဘောယူပြီး သုံးထားပြီးပြီတဲ့။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ဆရာဝန်လေးကသာ တဦးတည်းသော အမွေ ဆက်ခံသူမို. သူမရဲ. အိမ်ရှင်းခ၊ ပရိဘောဂတွေ ရှင်းခ၊ သိမ်းခတွေအပြင်၊ သူမ တင်ခဲ့တဲ့ အကြွေးတချို.ကိုတောင် ဆရာဝန် ဂျီပီလေးကပဲ ကူဆက်ပေးရတော့သတဲ့ .. ဟိ။